Cajiibka: Sawirada Webka. Habka ugu fudud ee loo Isticmaali karo Barnaamijka Kaydinta Webka
Sawir gacmeed waa barnaamij ama software lagu sameeyay kobcin xog shabakadaha. Maaddaama fiirinta xogta webka ay noqoto mid caan ah oo ka dhexjirta ganacsiyada, goobaha qaarkood waxay bixiyaan waraaqaha lacag la'aanta ah ee internetka halka kuwa kalena ay bixiyaan adeegyada ay tahay inaad bixiso. Mid ka mid ah qalabka ugu caansan ee bogga lagu kalsoon yahay waa Web Wareer.
Iyadoo Web Wareer leh, waxaad abuuri kartaa xogtaada gaarka ah ee cinwaanada emailka shirkadaha, ama waxaad abuuri kartaa alaabtaada ama liiska dukaanka e-shop. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu wanaagsan ee ay bixiso qalabkani waa in xiriirada shirkad laga soo saari karo si qarsoodi ah oo laga helo bogagyo badan oo ka mid ah xawaaraha shakiga leh iyo saxsanaanta sare! Sidoo kale, waxyaabaha la xoqay ayaa lagu keydin karaa qaabab kala duwan iyo meelo kala duwan si loo isticmaalo waqti kasta oo aad u baahato. Waa kuwan qaar ka mid ah sifooyinka sare ee software.
Web Wareer ah
14-bilaash ah oo maxkamad lacag la'aan ah
Web Scraper wuxuu la yimaadaa 14 maalmood oo lacag la'aan ah. Tani waxay ka dhigan tahay inaad tijaabin karto barnaamijka bilaashka ah laba toddobaad. Taas ka dib, haddii aad jeclaan lahayd, waad iibsan kartaa.
Ma u baahnid aqoonta barnaamijka
Web Scraper uma baahna aqoonta luuqadaha barnaamijyada ama qoraalka. Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa dhowr fure oo ah jiirka iyo dooro xogta loo baahan yahay si loo soo saaro.
Web Scraper wuxuu qabsan karaa xogta laga helo bogag badan oo websaydh ah, waxayna sidoo kale ka shaqeyn kartaa daalacado badan isku mar. Tani waxay badbaadineysaa waqtigaaga iyo tamartaada. Awoodda in laga soo saaro xogta laga helo boggaga internetka
Qalabkan shabakada buuggu wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro xogta adeegsadaha wakiilada si uu u soo dejiyo iyo u xoqdo xogta laga helo bogag internet ah oo ammaan ah isticmaalka xafiisyada wakiilada. Tilmaamahan wuxuu faa'iido u leeyahay ganacsiyada xogta ka tirsada bogagga internetka sida LinkedIn iyo Facebook.
Waxay u rogi kartaa xogta la xoqay qaabab kala duwan
Waxay u dhoofisaa xogta noocyo kala duwan. Waxay ku dhejin kartaa xogta la xoqay ee qaababka TXT, XML, iyo CSV iyadoo ku xiran tilmaanta isticmaalaha. Xaqiiqdii, waxay isku beddeli kartaa xog isku mid ah saddex nooc oo kala duwan.
Waxay bixisaa dhexgalka user-friendly ah
Qalabku wuxuu si fudud u fahmaa iyo ujeedada isticmaalka user, marka uma baahnid wax aqoon ah oo farsamo ah si aad u isticmaasho it. Uma baahnid inaad wax barato ama bandhig muuqaal ah si aad u isticmaasho.
Maaddaama uu leeyahay sifooyinka sarreeya, waxaad u maleyneysaa inay kharash badan tahay. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku timaadaa qiimo macquul ah.
Waxaa laga heli karaa laba nooc
Waxaa jira laba nooc oo ah Web Wareer. Nooca ugu horeeya wuxuu u ogolaanayaa inuu isbarbardhigo dalabyada iyo alaabooyinka tartanka. Nooca labaad waxaa loogu talagalay soo saarida xiriirka. Waxaad dooran kartaa nooca ku haboon ganacsigaaga. Si kastaba ha ahaatee, maaha wax aan caadi ahayn in ganacsigu hal iibsado labadaba. Waxaad sidoo kale sameyn kartaa sidaad u heli laheyd natiijooyin wanaagsan.
Gebogebo, maadaama aadan haysan wax lumin, sababta aanad u tijaabineynin tijaabada 14-ka maalin ee tijaabada ah. Waxaad ku dhammaan kartaa iibsashada kadib xilliga tijaabada Source .